JICE njem si Cambodia, Lao PDR, Myanmar na Vietnam gaa Thailand
Home » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » JICE njem si Cambodia, Lao PDR, Myanmar na Vietnam gaa Thailand
Thailandlọ Ọrụ Mgbakọ na Exlọ Ihe ngosi nke Thailand (TCEB) - Azụmaahịa na-edozi usoro ịzụ ahịa ya na Cambodia, Lao PDR, Myanmar na Vietnam (CLMV) na usoro aghụghọ iji dọta ọtụtụ ndị njem MICE si mba ndị agbata obi ha.
Ngbanwe usoro a bụ nsonaazụ dị oke egwu nke ndị njem CLMV MICE na Thailand, na-esochi ngosipụta ụzọ ụzọ gara aga na nkwalite na mmekorita ya na ndị mmekọ ụlọ ọrụ, Oriakụ Nichapa Yoswee, TCEB's Senior Vice President - Business kwuru.
“Azụmahịa ụmụ oke mba ndị si mba ndị gbara ha gburugburu na-egosi na ọ na-eju anya. N'ihi na afọ a, TCEB - Azụmahịa na-tactically ezubere iche pụrụ iche agba, kewara nzukọ na ịkpali (MI) na ngosi (E), na ụlọọrụ roadshow ihe na n'ọkwá, "O kwukwara.
TCEB - Azụmahịa amaliteworị ngosi ngosi ụzọ mbụ ya na Phnom Penh, Cambodia, na-elekwasị anya ndị njem MI na Jenụwarị. N’ọnwa Febụwarị, ihe ngosi ụzọ ndị Myanmar lekwasịrị anya na MI & E na Yangon na MI na Mandalay. Vietnamzọ Vietnam na-egosi na-elekwasị anya na MI & E na-eme ndokwa maka ngwụsị March na Hanoi na Ho Chi Minh City. Nke a na-ewusi ọnụnọ Thailand na CLMV ma e jiri ya tụnyere ụzọ nke afọ gara aga na-elekwasị anya na MI na CLMV na naanị otu ihe omume lekwasịrị anya na E na Cambodia.
A na-aga n'ihu na-akpali iche iche na-emetụta ma ndị ọrụ MI na ndị ọbịa na-azụ ahịa ruo afọ a, na-elekwasị anya nke ọma site na ahịa, iji nọgide na-eto ngwa ahịa.
Maka akụkụ MI, ebumnuche ahụ na-elekwasị anya ndị ọrụ njem na-eziga ndị njem MI na Thailand. TCEB - Azụmaahịa na-emekọrịta Bangkok Airways ọzọ na mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ "Fly na Meet Double Double Redefined".
Ọ na-enye ihe ùgwù iji zukọ ma na-agba ume dị iche iche ma ọ dịkarịa ala mmadụ 30 si CLMV, gbadaa site na opekempe nke 50 na mbụ, ndị na-aga ihe omume ma ọ bụ na-anọ na Thailand MICE Venue Standard (TMVS) ụlọ ọrụ ndị a kwadoro.
Ihe omuma TCEB gunyere MICE Lane Service n'ọdụ ụgbọ elu Suvarnabhumi, Zute ma kelee ma rụọ ọrụ omenaala. Bangkok Airways na-enye oche ndị na-enye ekele, ego ntinye akpa tinyere mgbakwunye ịbanye na otu na ibute ụzọ.
Maka ngalaba E, TCEB - Azụmaahịa na-elekwasị anya ndị na-ahazi ọrụ azụmaahịa, dị ka federations azụmaahịa, mkpakọrịta azụmaahịa, mgbasa ozi azụmaahịa, yana ụlọ ọrụ azụmaahịa dị iche iche iji weta ndị ọbịa azụmaahịa maka mkparịta ụka azụmaahịa na ngosipụta mba ụwa ahaziri na Thailand kwa afọ. Ndị na-eweta ma ọ dịkarịa ala 10 ndị ọbịa ahịa na ngosi ngosi mba ụwa na-akwado TCEB na Thailand bụ ndị ruru eru maka 50% kwụsịrị ụlọ ma ọ bụrụ na ha ezute akara nhazi maka ọnụ ọgụgụ nhọpụta n'oge ihe omume ahụ.
Ọnụ ọgụgụ ndị njem MICE si mba anọ ahụ na 2018 ruru 151,087, mmụba nke 206.65% ma e jiri ya tụnyere ndị njem 49,270 CLMV MICE na 2017. Ọnụ ọgụgụ ahụ gụrụ 31.72% nke ndị mbata ASEAN MICE niile (476,285) na Thailand. Site na Vietnam a maka 11.61% (55,306), Lao PDR 11.57% (55,125), Myanmar 4.77% (22,733) na Cambodia 3.76% (17,923).
IATA: 2019 na-amalite na ọkwa dị mma maka ịchọrọ ndị njem
Nlegharị anya ịghọ ụlọ ọrụ US $ 50 ijeri na India
IATA: travelgbọ njem ụgbọ elu nke ụlọ na-ahụ ka ọ na-arị elu na March mana njem mba ụwa ka na-agbada